Lalana momba ny Fampihavanam-pirenena:Handalo eny amin’ny Antenimieran-doholona -
AccueilRaharaham-pirenenaLalana momba ny Fampihavanam-pirenena:Handalo eny amin’ny Antenimieran-doholona
16/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hiasa andro aman’ alina ireo loholon’i Madagasikara handinika sy handany ireo volavolan-dalàna omaly Alakamisy sy anio zoma etsy amin’ny Lapan’ Anosikely, eo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Antenimieran-doholona, Rakotomanana Honoré sy ireo mpikambana eo anivon’ny Birao maharitra. Taorian’ny fandanian’ny Antenimieram-pirenena ireo volavolan-dalàna voalaza teo ambony ireo dia anjaran’ny Antenimieran-doholona kosa indray no mandinika izany. Lalàna dimy no indray lany teny amin’ny Antenimieran-doholona ny marainan’ny alakamisy faha-15 Desambra 2016, volavolan-dalàna roa mitondra ny laharana faha-001- 2016 tamin’ny 20 Janoary 2016 mifehy ny fifamoivoizana eto Madagasikara sy ny laharana faha-012 mikasika indrindra ny fahazoana mari-boninahi-pirenena « instituant l’Ordre National » tamin’ny 02 Jona 2016 andaniny. Ankilany kosa ny laharana faha-031 – 2016 tamin’ny 22 Jolay 1960 « mikasika ny paikady mahasahana ny ady madio » sy ny faha- 025 – 2016 tamin’ny 15 Jona 2016 mahakasika ny fahazoana ny zom-pirenena ary ny laharana faha-010 – 2016 mahakasika ny Fampihavanam-pirenena. Tsy dia nisy adihevitra firy moa ny mikasika ity farany.
Ireto avy no nasiam-panitsiana tamin’izany. Mikasika ny volavolan-dalàna laharana faha-001-2016 ny andininy faha – 3.1-1, dia nasian’ny Antenimieram-pirenena ny fanitsiana amin’ny andalana faha-5 momba ny fiahian’ny kaominina teo aloha ny fanomezan-dalana ireo “Vehicule non motorisé” dia novaina ireo Loholona ho andraikitry ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny Atitany no tokony hiandraikitra izany manomboka izao. Fanitsiana faharoa nentin’ny Antenimieran-doholona dia ny fanafoanana ny fampidirana sy fampiasana ny fiara « conduite à droite » eto Madagasikara. Ny Volavolan-dalàna laharana faha-012-2016 mikasika ny fahazoana ny mari-boninahi-pirenena tamin’ny faha – 02 Jona 2016 dia nasiam – panovana ny andininy faha-14 : izay mivaky hoe : ireo olom-boafidy na mivantana na tsia sy ireo mpikambana eo anivon’ny Andrim-panjakana mpanao Lalàna (Parlemantera ) dia mahazo avy hatrany ireo mari-boninahi-pirenana na “Ordre National”. Nanamarika ny tolakandro kosa ny fandinihana ireo volavolan-dalàna miisa 21 mialoha ny famaranana ny fe-potoam-pivoriana faharoa anio zoma faha-16 Desambra 2016.